केटी नहेरेरै विवाह गर्ने आसिफ शाह - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
कर्कश, दुई रुपैयाँ जस्ता सिनेमामा अभिनय गरेका अभिनेता आसिफ शाह आज देखि ३७ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । जीवनका ३६ बसन्त पार गरेका आशिफ विवाह बन्धनमा बाँधिएकै १२ वर्ष भईसकेको छ । उनले नाशिरा सँग मागी विवाह गरेका थिए ।
उनको विवाह प्रसंग निकै चाख लाग्दो छ । जन्मदिन विशेष कुराकानीमा उनले आफूले हुनेवाला श्रीमती अर्थात नाशिरालाई ईन्गेजमेन्ट गर्ने समय सम्म नदेखेको बताए । परिवारबाट विवाह गर्ने कुरा आएपछि उनले विवाह गर्ने निधो गरे । विवाह फाईनल भईसकेपछि ईन्गेजमेन्टको समयमा मात्रै उनले नाशिरालाई देखेका थिए । त्यसबखत केटी कस्ती होली? भन्दा पनि विवाह गर्नु पर्छ भन्ने मात्र उनको दिमागमा थियो ।
यहिकारण आमाले मन पराएर विवाहको लागि छिनोफानो गरेकी नाशिरासँग उनले लगन गाँठो कसेका थिए । परिवारको आग्रहमा उनले विवाह त गरे तर विवाह पछि आफू विवाहित हुँ भनेर स्वीकार्न उनलाई झण्डै तीन महिना लाग्यो । विवाह पछि हिँडिरहेको समयमा बेला बखतमा ए ! म त विवाहित पो हुँ त ! भनेर झसंग हुन्थे । साँझ परेपछि साथी भाईलाई भेट्ने योजना बनाउँथे तर घरमा श्रीमती भएको याद आउँथ्यो र उनी घर फर्कन्थे । तर तीन महिना पछि भने उनी यी सबै कुरामा बानी परे ।
विवाह गर्दिन भन्ने कारण नै थिएन
आशिफको २५ वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो । त्यो उमेरमा करिअरमै केन्द्रित भएका कारण विवाहको बारेमाउनले सोचेकै थिएनन् । तर परिवारबाट विवाह गर्ने कुरा आएपछि उनले विवाह गरे । प्रेमिका पनि नभएको भन्दै त्यतिबेला विवाहको लागि ईन्कार गर्न आफूसँग कुनै कारण नभएको उनी बताउँछन् । आमाले भने अनुसार विवाह गरेको भन्दै उनले आफूलाई पूर्ण रुपमा आमामा समर्पित सन्तान भएको पनि बताए ।
करिअर र विवाह अलग पाटो
विवाहको समयमा आशिफ नेपाल वान टेलिभिजनमा‘फर यु’ र ‘सँगसँगै’ नामका कार्यक्रम चलाउने गर्थे । त्यसबखत उनका यी कार्यक्रमहरु चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम हरुको सूचिमा थिए । करिअरको शुरुवातमै विवाह गरेका आशिफको विवाहको बारेमा आफ्नै विचार छ । धेरैले विवाह गर्दा करिअरमा असर पर्छ भन्ने गर्छन् । तर उनी भने ठिक यसको विपरित विचार राख्छन् । विवाह र करिअर भनेको बिल्कुलै अलग पाटो भएको भन्दै उनले विवाह पछि जीवनमा खासै असर नपरेको बताए ।
आशिफ नाशिरासँग एकदमै खुशी र सुखी बैवाहिक जीवन बिताईरहेका छन् । विवाहको एक दशक बित्दा उनी दुई छोरी आशिरा र अम्मराको पिता बनेका छन् । उनकी जेठी छोरी (१० वर्ष)आशिरा ५कक्षामा अध्ययनरत छिन् भने कान्छी अम्मरा (७वर्ष) अहिले १ कक्षामा अध्यनरत छिन् ।
काठमाण्डौ कार्तिक २८✎ अभिनेता आसिफ शाह आज देखि ३७ वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । २०३६ साल कार्तिक २८ गते जन्मेका आशिफ नायकको रुपमा स्थापित ह..